About Us - Jinbiao Construction Materials Co., Ltd.
Hebei JINBIAO zokwakha TECH Corp., LTD.
Iinjongo zethu eziphambili zezi ukubonelela abaxumi bethu ehlabathini lonke nomgangatho elungileyo, ixabiso wokhuphiswano, sanelisekile wokunikezela ngeenkonzo ezigqwesileyo. ukwaneliseka Customer injongo yethu ephambili. Samkela ukuba utyelele showroom kunye ofisi yethu. Sijonge phambili ukuseka ubudlelwane ishishini nawe.
Hebei Jinbiao Materials Ulwakhiwo owasekwa ngo-1986 iingcali ekuvelisweni kwemathiriyeli yokwakha. Efektri yethu injani ngaphezu 800,000m2 ndawo, kunye nabasebenzi abangaphezulu kwama-400, iingcali-40, ikomkhulu ebhalisiweyo RMB 60.4 yezigidi, lwathi million 500 yuan ka liquidity.In Shijiazhuang, 26 Disemba 2014, inkampani ezidweliswe kwi-stock exchange, waba lokuqala inkampani ekuluhlu apha kule ndawo, iimveliso nazo ebhalisiweyo umnatha igolide eqhelekileyo, umqobo ingxolo aluminium formwork brand. Ekuqaleni 90 ubudala, Jinbiao wegqitha ISO9001- kwezatifiketi 2000 umgangatho kuquka i "AAA isatifikethi umgangatho kwibakala", "kwiphondo Hebei amashishini ezibalaseleyo", "lweshishini elithenjiweyo", "imveliso ekhuselekileyo" kunye nezinye isiqinisekiso honors.
Hebei Jinbiao Construction Materials Tech Corp., Ltd. ibandakanyeka kwimveliso kunye nophuhliso fencings umnatha wire, imicwe oluhlabayo kunye neemveliso ezinxulumene esekelwe e Anping, yayingeyiyo wocingo Land of China.
Product Umgangatho: iimveliso zethu sidlule isiqinisekiso ISO9001 lwenkqubo yolawulo lomgangatho, iziqinisekiso CE imveliso, yaye yaseka intsebenziswano ixesha elide namaZiko Acoustic e-mpuma Asia. Ngaphandle JINBIAO omisa iqela elilodwa ukuhlolwa umgangatho ukuqinisekisa ukuba zonke mveliso kakuhle abafanelekayo.
Imveliso Capacity: JINBIAO iNkampani izityalo yemveliso 3 kuquka Wire mesh Fence, Izithintelo zandi kunye Aluminium Formwork. Amandla emveliso Daily unako ukufikelela ucingo 18km, 5000 imiqobo m2 isandi, yaye 8000 emva intsimbi iiPC H. Aluminiyamu Formwork ziyilwe zaza ngenxa izakhiwo iiseti ngaphezu kwama-10 ngenyanga nganye.
Jinbiao lixhotyiswe amise phezu 80 lokuhlola imveliso kwiklasi yokuqala kunye nezixhobo R & D ukuvelisa ucingo square post wocingo, welding wocingo incwadi esongwayo, ucingo link ityathanga, ucingo yenkuku olunemingxuma, iinkomo ucingo intsimi iigusha / /, nocingo oluhlabayo kunye umqobo ingxolo ukuze wonke abathengi.
Sinento imveliso eqhelekileyo kunye epheleleyo inkqubo yolawulo lomgangatho ukuqinisekisa iimveliso ezisemgangathweni ophezulu ukuhlangabezana neemfuno abaxumi bethu.
Inkampani yethu iye yaphumelela igama elihle e-China kwaye ngaphandle iimveliso kumazwe amaninzi kunye nemimandla.
Kuba kwiimfuno zakho ukubiya, nceda uqhagamshelane nathi ngoku!
Imveliso C apacity :
JINBIAO iNkampani izityalo yemveliso 3 kuquka Wire mesh Fence, Izithintelo zandi kunye Aluminium Formwork. amandla emveliso Daily unako ukufikelela ucingo 18km, 5000 imiqobo m2 isandi, yaye 8000 emva intsimbi iiPC H. Aluminiyamu Formwork ziyilwe zaza ngenxa izakhiwo iiseti ngaphezu kwama-10 ngenyanga nganye.
Imveliso E quipment :
Inkampani yethu kwizikhundla zemveliso, ngaphezulu kwama-10, kuquka ukusika, welding, eguqa kunye nezinye imigca imveliso ezenzekelayo. Ngowe-2016 JINBIAO wachitha million 20 eninzi imali ukuze aqalise izixhobo enkulu entsha unyango spray imveliso komhlaba.
iimveliso zethu athengise kakuhle zombini apha ekhaya nakumazwe aphesheya kunye nomgangatho obalaseleyo kunye nexabiso elilungileyo. ezifana Russia, Singapore, Dubai, eUnited States, Canada, Australia, Japan etc ... Kwaye sele iphumelele apreyiza elungileyo ngabaxhasi oversea, unandipha negama phezulu kushishino.
Eyona njongo yethu elandelayo kukuba ngaphezulu ezilindelekileyo zonke umxhasi ngokunika inkonzo lwabathengi obalaseleyo, libhetyebhetye kunye nexabiso elikhulu. All in zonke, ngaphandle abathengi bethu azikho thina; ngaphandle abathengi onwabile yaye anelisekile ngokupheleleyo, asikwenzi. Sijonge ngenxa ihoseyile, Drop nqanawa. Nceda uqhagamshelane nathi ukuba nomdla iimveliso zethu. Nethemba ukwenza ushishino nani nonke. ekumgangatho ophezulu ngolwandle fast!
Ukususela ekusekweni yethu, thina ukuqhubeka liphucula iimveliso zethu kunye kwimithetho yoncedo lwabathengi. Siya kuba nako ukukunika uluhlu olubanzi iimveliso iinwele kwizinga eliphezulu ngamaxabiso aphantsi. Kwakhona sinako ukuvelisa iimveliso iinwele eyahlukeneyo iisampuli zakho. Silwela ekumgangatho ophezulu ngexabiso elifikelelekayo. Ngaphandle koku, sibonelela kakuhle inkonzo OEM. Sibamkela ngokufudumeleyo odolo OEM kunye nabathengi ehlabathini lonke, ukuba basebenzisane kunye nathi zophuhliso efanayo kwixesha elizayo.
Okwangoku uthungelwano lwethu intengiso likhula ngamaxesha onke, ukuphucula umgangatho wenkonzo ukuhlangabezana nemfuno yoMthengi. Ukuba unomdla naziphi iimveliso, nceda uqhagamshelane nathi nanini na. Sijonge phambili ngokwakha ubudlelwane zoshishino ngempumelelo kunye nawe kufutshane elizayo.
Sinikezela iintlobo ezininzi iimveliso kweli candelo. Ngapha koko, imiyalelo ezenzelwe nazo ziyafumaneka. Yiyiphi eyona, uya kunandipha iinkonzo zethu esihle. Ngazwi linye, kumzi wakho liqinisekisiwe. Wamkelekile ukuya inkampani yethu! Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi, nceda uze website.If yethu nayiphi na eminye imibuzo, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi.
East District, Industrial Park, Anping County, Hebei kwiPhondo, China (No. 27, Weier Road)
Projects for bridge, higway railway
Kugqitywe ngokugqibeleleyo-iRongwu High-spe ...
Iholo elitsha lemiboniso